simba – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qeybgaley Shir Madaxeed gaar ah oo looga hadlayey la dagaalanka kooxda ISIL iyo xagjirnimada, kulankaas oo uu martigeliyey Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, kana dhacay xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York oo uu ka socdo Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgaley inta ...
Fanaaniinta Xidigaha Geeska oo Habeen 4-aad Xabsi ku hoyanaya & Shacabka Hargeysa oo iscelin waayay
Shacabka magaalada Hargeysa ayaa si aad ah qaarkood waxay kaga soo horjeesteen xariga magaalada Hargeysa loogu geystay fanaaniinta Xidigaha Geeska qaarkood. Shacabka ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay xariga fanaaniinta, waxaana qaarkood ay soo jeediyeen in xabsiga laga sii daayo fanaaniinra. Hoos ka daawo muuqaalka.
Ku simaha Madaxweynaha dalka ahna Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo xiisadaha u dhaxeeya beelaha walaallaha ah ee ka jira deegaanno ka kala tirsan gobollada Sool iyo Nugaal. “Hor iyo horaan waxaan ka tacsideynayaa dadkii ku dhintay xiisadaha u dhaxeeya dadka walaallaha ah ee xoolo dhaqatada ah ...
Wasiirka Maaliyadda oo Nairobi kula kulmay Bangiga horumarinta Africa
Wasiirka maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aden Farkeeti ayaa saaka dib ugu soo laabta magalaada Muqdisho, kadib markii shir looga hadlayey horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha dalka magaalada Nairobi kula soo qaatay Bangiga Horumarint Africa. Wasiirka ayaa saaka markii uu ka soo dagay garoonka diyaaradaha Aden Cade saxaafada kula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankii dhex maray Wasaaradda Maaliyadda iyo Bangiga ...
Dozens of British troops are to be sent to Somalia to help peacekeeping efforts to counter Islamist militants, David Cameron has announced. Up to 70 personnel will join a United Nations contingent supporting African Union troops fighting al-Shabab. Up to 300 could also be deployed in South Sudan over time. The PM, who will pledge the support at the UN ...
Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta gaaray taliyaha guud ee ciidamada Midowga Yurub General Patrick De Rousiers, iyadoo si wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Magaaladaasi saraakiil ka tirsan Ciidanka AMISOM ee ka howlgalaya gobolka iyo mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Hiiraan. Generalkan ayaa waxaa safarkiisan Baladweyne ku wehliyay wakiilka Midowga Yurub ee ...